Rey Miguel iyo José Leonardo Chirino, oo ah astaamaha caabbinta addoonsiga ee Venezuela - Afrikhepri Fondation
Qalabka wax lagu rakibo : Cart Icon waxay u baahan tahay WooCommerce plugin si loo rakibo.
Isniin, Ogoosto 3, 2020
Rey Miguel iyo José Leonardo Chirino, waa astaamaha caabbinta addoonsiga ee Venezuela
Adkeysiga addoonsiga ee Venezuela wuxuu bilaabay goor hore. Duubitaankii ugu horeeyey wuxuu ka dhacay 1532 Coro laakiin kacdoonkii ugu caansan wuxuu ka dhacay miinooyinka Buria sanadkii 1552 waxaana hogaaminayay Miguel (oo loo yaqaan El Negro Miguel ama Rey Miguel, taasoo macnaheedu yahay) "Miguel madow" iyo "King Miguel" siday u kala horreeyaan).
Addoonkii Afrikaanka ahaa, MIGUEL wuxuu ku caasiyey waardiyaha sababa la xiriira xaalado sharafdarro ah oo uu ku soo qaatay miinooyinka. Dhaqanka afka ayaa sheegaya inuu awood u yeeshay inuu qabto seefta iyo karbaashida qofka daawaday isaga iyo taageerada adoomada kale, wuxuu ka qaatay hub gaar ah gacmaha Isbaanishka, kadibna xaaskiisa Guiomar, wiilkiisii ​​iyo addoomadii kaleba, waxay u carareen buuraha. Markii ay halkaas gaareen, wuxuu sameeyay beel wada-deggan, dowlad abaabulay, derbi weyn ka dhistay hareeraha dhulka, guryo dhiseen, wuxuu doortay wadaad u adeega oo dadka ka caawiya sidii ay ugu dhaqmi lahaayeen sidii ay ahayd. diimaha awoowayaasha, oo wuxuu awooday inuu abaabulo ciidan. Isaga oo wata ciidankiisa, Miguel wuxuu awooday inuu iska caabiyo weeraradii badnaa ee Isbaanish. Habeenkii, isaga iyo raggiisii ​​qaarkood waxay galeen dhuumasho ku wareegsan si ay uga dhaadhiciyaan addoomaha kale inay ku soo biiraan. Qaar Hindi ah ayaa waliba ku soo biiray bulshada xabadka, kuwa dambena waxyar ayey ku koreen. Tirada xabadka ee ciidankiisa waxaa lagu qiyaasaa 1200, iyo tirada guud ee bulshada ku dhawaad ​​10.000. Miguel waxaa loo magacaabay boqorka, xaaskiisa boqoradda iyo wiilkiisa ku guuleysta carshiga.
Ciidankii reer marooniga ayaa la jabiyey markii Isbaanishka gobolkaasi la kulmay oo gacan ka helay nin Hindi ah oo la odhan jiray Tocuyo, oo si lama filaan ah loogu weeraray albaabka boqortooyada cusub. Waxay dileen Miguel waxayna garaaceen ciidankiisii. Qaar ka mid ah addoomayaashii hore ayaa la qabtay oo haddana la addoonsaday, laakiin badidoodu way ka baxsadeen inay samaystaan ​​beelo kale oo dalka ka mid ah. Bulshooyinka addoonsiga baxsadka ah ayaa sii korayay qarniyadii 1720aad iyo 30.000aad, 60.000na waxaa jiray qiyaastii XNUMX oo xabadka ka soo horjeedda XNUMX oo weli ka shaqeeya dhir. Xitaa boqoradda Guiomar, oo iyadu ahayd boqoraddii ugu horraysay uguna madow ee Ameerika, ayaa la qabtay wiilkeedii oo haddana addoonsatay.
José Leonardo Chilino, oo dhashay Abriil 25, 1754, wuxuu ahaa addoon, uu u adeegsaday sayidkiisii ​​Isbaanishka si uu ganacsi uga sameeyo Galbeedka Indies iyo Latin America. Wuxuu guursaday addoomo la odhan jiray Maria de los Dolores oo uu lahaa saddex carruur ah: Maria Bibiana, Rafael María iyo José Hilario. Wuxuu xilligaas ku sugnaa Santo Domingo oo ku yaal dhulkii Haiti-maanta, wuxuuna arkaa kacdoonnada kaladuwan wuxuuna horumariyaa fikradaha kacaanka.
Markii uu ku soo laabtay Venezuela, wuxuu la kulmay addoomo kale warshad la yiraahdo Macanillas oo u maleeyay fallaagada isaga la mid ah, oo uu ka mid ahaa Joseph Caridad Gonzalez, oo reer Kongo ah, kaasoo aad wax badan uga ogaa kacaankii Faransiiska.
Waxaa dhiirrigeliyay kacaankii Faransiiska iyo kacdoonkii ka dhacay Haiti (kuwa horseeday baabi'inta addoonsiga iyo madaxbannaanida jasiiradda), isaga iyo addoommadiisii ​​waxay go'aansadeen inay la mid noqdaan afgembiga addoonsiga Venezuela iyo aasaasidda jamhuuriyadda. Laakiin tiro ahaan kuma filna, inkasta oo ay jirto saameynta maxalliga ah, kacdoonku kama uusan dhaafin qaybta galbeed ee dalka. Waxaa la xiray, afaraad iyo dilaacis Isbaanish ah 10 December 1796. (sawirka sawirka: waa taalada meeshiisa ay ku taalo Caujarao, ee gobolka Falcon)
Waxaa sidoo kale jira tiirar kale oo isaga hortiisa ah garoonka diyaaradaha oo magiciisa ku yaal, magaalada Coro, oo wali ku taal gobolka Falcon.
Ka tag aragtidaada
Waxaad ku jawaabtay"Rey Miguel iyo José Leonardo Chirino, calaamadaha ..." Dhowr daqiiqo ka hor
ITOOYINKA KU SAABSAN SHAQADA SAMEEYA
Caqliga addoonsiga: waxa aan waligaa laguugu sheegin
Yaa Ibraahim Petrovich Hanibal?
Soo iibso wax soo saar
Hoos guji si aad u dhajiso maqaal
Afrikhepri Foundation on Iska ilaali isku dhafka tooska ah (2015): "Filim wanaagsan oo la arko!" Agoosto 3, 15:57
Afrikhepri Foundation on Magacyada Afrikaanka ee quruxda badan ee carruurteena iyo macnahooda: "Fadlan buuxi liiska magacyada Afrikaanka" Jul 30, 11:08
Afrikhepri Foundation on Asalka ereyga Afrika: "Annagu ma nihin Afrikaan ah laakiin reer Kamites." Jul 30, 09:49